युनिशलाई साथ दिँदै स्थानिय तह « Khabar24Nepal
युनिशलाई साथ दिँदै स्थानिय तह
रेशम बहादुर खड्का
असार ४ ,जाजरकोट। खेल क्षेत्रमा लागेको हरेक व्यक्तिको एउटै सपना हुन्छ राष्ट्रिय टिममा पर्नु । त्यसको लागि चाहिन्छ कडा मेहनत । यस्तै महान सपना बोकेका जाजरकोटका एक युवा हुन् युनिश बिक्रम सिंह । उनी अहिले आर्थिक सहयोगको खोजिमा छन् । जाजरकोटमा अभ्यास खेलको लागि न त भौतिक पूर्वाधार नै छ, न त प्रशिक्षण । यसै कारण उनी प्रशिक्षणको लागि आर्थिक खोजिमा लागेका छन् । उनले अहिलेसम्म बुवा आमाको लगानीमा धेरै प्रशिक्षण लिए । तर, यसपालि उनी बुवा आमालाई आर्थिक भार नबोकाउने पक्षमा छन् । परिवारबाट पूर्ण रुपमा क्रिकेटमा सहयोग पाएका उनको तत्कालीन योजना छ, आर्थिक जुटाएर अभ्यासको लागि भारतको राजस्थान जाने ।
उनको सपना साकार पार्न जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले उनलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । छेडागाड नगरपालिका १२ का स्थानीय युवा सिंहलाई नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको हो । कर्णाली प्रदेशबाट क्रिकेट खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी प्रतिनिधित्व गर्ने सिंहलाई थप अभ्यासको लागि आर्थिक समस्या भएपछि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको हो । नगरपालिकाले सिंहको अभ्यास खेलको लागि २ लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ । सानो उमेरदेखि क्रिकेट क्षेत्रमा रुचि राख्दै आएका सिंहलाई अभ्यास खेलको लागि आर्थिक समस्या भएको कारण नगरपालिकाबाट सो रकम हस्तान्तरण गरिएको नगर प्रमुख लालबहादुर महताराले बताए ।
नगरपालिकाभित्र उर्जाशिल एउटा खेलाडी उत्पादनको लागि नगरपालिका सधै सकारात्मक रहेको प्रमुख महताराले बताए । जिल्लामा भौगोलिक बिकटतासँगै खेलमैदानको अभाव चुनौती सँगै सिंह प्रदेशदेखि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा भाग लिँदै आएका छन । जाजरकोट जस्तो दुर्गम जिल्लामा जन्मेका सिंह कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन मा.वि खलंगाबाट सुरु भएको उनको खेल करियर हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप एकदिवसिय प्रतियोगितासम्म कर्णाली प्रदेशबाट खेलेका थिए । टिभीमा खेलेको देखेर मोजाको बलबाट क्रिकेटको यात्रा सुरु गरेका सिंह जाजरकोट जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरु खेल्न सफल भएका छन । सिंहले यू–१६ राष्ट्रिय स्कुल क्रिकेट लिग, आठौं राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता, मनमोहन यू–१६ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता, प्रधानमन्त्री कप लगाएतका ठुला राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा कर्णाली प्रदेशबाट सिंहले खेल्ने अवसर पाएका थिए ।
क्रिकेट एशोसियन जाजरकोट दर्ता गरी क्रिकेट गतिविधि गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । क्रिकेट गतिविधिको लागि आफुहरुले माग गर्दा पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्– ‘जिल्ला खेलकुद अन्य खेलहरुप्रति सकारात्मक रुपमा लागिपरेको छ, तर क्रिकेटमा चासो दिएन यसो हुँदा हामी झन् पछि परिरहेका छौँ ।’
केही समय अघि रुकुम पश्चिम चौरजहारीको नाखिरा मैदानमा आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा उनले जाजरकोटलाई पहिलोपटक उपविजेताको उपाधि दिलाए । जुन प्रतियोगितामा उनी जाजरकोटबाट कप्तानी सम्हालेका थिए । हाल खेल अभ्यासको लागि भारतको राजस्थान जानको लागि आर्थिक अभाव भएपछि उनी अभ्यासबाट बञ्चित भएका छन् । ‘जाजरकोटका सबै स्थानीय तहहरुमा कुरा गरेको छु, आशा छ सकारात्मक निर्णय आउनेछ’ सिंहले भने–‘भेरी नगरपालिकाले नगर सभाबाट निर्णय गरी आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ, अन्यको केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ उनले अभ्यासको लागि आर्थिक अभाव भएकोले सम्बन्धित निकायसँग सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । माथिल्लो तहमा पुग्दा हाईहाई गर्नुभन्दा तल्लो तहबाट प्रशिक्षण दिएर खेलाडी उत्पादन गर्नु ठुलो उपलब्धी रहेको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीको भनाई छ ।
मोजाको बलदेखि राष्ट्रिय रेकर्डसम्म युनिश
छेडागाड न.पा. १२ मा जन्मेका सिंह त्रिभुवन मा.वि. खलंगामा पढ्दा टि.भी. हेरेर क्रिकेट सिकेका थिए । सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केका सिंह गल्लीमा मोजाको बल खेल्दै अहिले कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरी ठुला राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो ‘अफ स्पिन’ बलिङ्गको जादु देखाउँछन् । उनले बलिङ्ग मात्रै नभएर हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री कपमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरी ब्याटिङ्गमार्फत राष्ट्रिय रेकर्ड समेत बनाए । त्यो रेकर्ड हो अन्तिम विकेटको रुपमा आएर ५४ रनको अर्धसतकीय साझेदारी रन बनाउनु । त्रिभुवन आर्मी क्लवसँगको खेलमा उनले ललित प्याकुरेलसँग उक्त रेकर्ड बनाएका हुन् ।
उनले कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरी यु–१६ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा २ खेल खेलेर २ विकेट लिए । यस्तै आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उनले २ खेल खेल्दै ३ विकेट लिएका थिए । साथै मनमोहन यू–१६ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ३ खेल खेल्दै २ विकेट लिएका थिए । यस्तै मनमोहन राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगितामा पनि उनले उत्कृष्ट खेलेका गरेका थिए । यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलोपटक कप्तानी सम्हाल्दै ३ खेल खेलेर ८ विकेट लिई जाजरकोटलाई उपविजेताको उपाधि दिलाए । उनले खेलेका अधिकांश खेलमा ३ को इकोनोमी रहेको छ ।
इराक-नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल (प्रत्यक्ष प्रशारण)
पूर्वमन्त्री बस्नेतद्वारा प्रचण्डलाई चेतावनीः ‘आकाश तिर फर्केर थुक्दैछौ, थुक तिम्रै मुखमा पर्नेछ’